IHodges University Imemezela i-PET Hodges Connect »iHodges University
Ukugcwalisa igebe labasebenzi nge-Professional Training Initiative: IHodges University Imemezela iHodges Connect
Igebe lamakhono abasebenzi yinto izinhlangano eziningi zokuthuthukisa amabhizinisi ebezixoxa ngayo iminyaka. Izinkampani zicela izixazululo. IHodges University iphendula lolo cingo ngohlelo lwayo loqeqesho lobuchwepheshe, iProfessional Education and Training (PET), olubiziwe IHodges Connect.
"IHodges Connect yenzelwe ukulungisa abasebenzi ngamakhono adingeka kumqashi adingekayo ukuze baphumelele ezimakethe zomsebenzi zanamuhla nakusasa," kusho uDkt John Meyer, umongameli waseHodges University. “Le nkundla entsha izohlinzeka ngezithangami zokufundisana, amakilasi nezinhlelo ezingenziwa ngezifiso ukuze zivumelane nanoma yimuphi umkhakha, futhi zenziwe ngabantu ngabanye noma njengeqembu lezinkampani. Lokhu kumayelana nokunikeza abasebenzi bethu lelo thuba lokuncintisana. ”
Lezi zinhlelo zokuthuthukisa abasebenzi zinobude obuhlukahlukene futhi zenzelwe ukunika ababambiqhaza amakhono asebenzayo ngokushesha abangawasebenzisa ngakusasa. Lokhu kwehlukile ezinhlelweni zendabuko zezifundo ezinikezwa yiYunivesithi, futhi zingathathwa yinoma ngubani onentshisekelo. Akukho ukuhlolwa kwangaphambi kokungeniswa noma okuhlangenwe nakho kwangaphambilini ekolishi, noma ngisho nediploma yesikole esiphakeme edingekayo.
Iworkshop yokuqala, uhlelo lwesitifiketi soMphathi Wokuqala, isiyatholakala manje futhi yamukela ukubhaliswa. Uhlelo lutholakala kokubili njengomhlangano wokufundela ekhempasini yaseHodges University noma ku-inthanethi ngokuphelele.
Ngemuva kokuphothulwa kwanoma iyiphi ifomethi, abaphothule iziqu bazothola isitifiketi sabo sokuqala somqondisi kusuka eHodges University.
Kungani Ukuqeqeshwa Komphathi Wokuqala?
"Uhla Lwezibalo Zemfuno Zesifunda lowe-2019-2020 lukhombisa isidingo esikhulu sabaphathi bomugqa wokuqala ngokuvulwa okungaphezulu kuka-4,000," kusho uDkt Meyer.
Izindawo ezifuna abaphathi bomugqa wokuqala zifaka abasebenzi emisebenzini yokwakha nakokukhipha izinto, imishini, abafaki kanye nabalungisi, ukuthengisa okungathengisi, ukusekelwa kwehhovisi kanye nezokuphatha, insizakalo yomuntu siqu, ukuthengisa okuthengiswayo, ukugcinwa kwezindlu kanye nendawo yokuhlanza, ukwakheka kwensimu kanye nensizakalo yotshani, nokuhamba nezinto -ukuhambisa umshini nabaqhubi bezimoto.
I-PET Hodges Xhuma
IPET Hodges Connect Initiative inezinhlelo ezengeziwe nezinhlelo zokwengeza ngokuqhubekayo iminikelo emisha njengokufunwa yimboni.
Olunye uhlelo olukhona lubandakanya iSitifiketi Sokusebenza Kobungcweti (PEC) - uhlelo lwezifundo ezinhlanu olugxile ekuthuthukisweni kwamakhono athambile kwezobuchwepheshe, ezokuxhumana nakwezamabhizinisi - kanye. iProfessionalism eSitifiketini Sasemsebenzini - isifundo esifushane sokulungiselela abafundi ama-internship, noma noma ngubani ofuna umsebenzi wakhe wokuqala. Eminye imihlangano yokufundisana etholakalayo ifaka phakathi umehluko wezizukulwane emsebenzini, ukusuka kontanga kuya kumholi, kanye nekhono lamasiko. Ezinye izihloko ze-workshop zifaka phakathi ukuxazululwa kwezingxabano, izisekelo zolimi lomzimba, ukuba ngumphathi othandekayo, ukukhuthazeka kwabasebenzi, ubuhlakani bezemizwa, amaqembu asebenza kahle, ukuphepha emsebenzini, ukuphathwa kwesikhathi, ukwakhiwa kweqembu, insizakalo yamakhasimende, amakhono enhlangano nobuholi bezinguquko.
Endaweni yezempilo, iPET Hodges Connect inikeza amakilasi ku-Basic Life Support, Basic Life Support Refresher, kanye ne-Heartsaver First Aid Cardiopulmonary Resuscitation Okuzenzakalelayo kwangaphandle kwe-Defibrillator.
Kuyeza maduze, iminikelo emisha indawo yezobuchwepheshe, kufaka phakathi i-AUTOCAD ne-ADOBE Software.
Ngeminye imininingwane ngePET Hodges Connect, i-imeyili IHodgesConnect@Hodges.edu Noma vakashela Izindlela.Hodges.edu/HodgesConnect.
Tags: #HodgesConnect, Training, Abasebenzi